We.com.mm - ကိုယ့်သီချင်းတောင် ကိုယ်မပိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ရောက်ခဲ့တဲ့ Taylor Swift
တေတေ တစ်ယောက်တော့ တော်တော်လေး ခံပြင်းနေမှာပါ။ သူမအရင်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Album ခြောက်ခုစလုံးအခုဆို သူမအပိုင်မဟုတ်တော့လို့ ...
ဒီသတင်းကိုတော့ Record Holdings ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ithaca က ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၁၇ မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Reputation Album တွေအထိကို တေတေ က Big Machine Label Group မှာ အသံသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် Big Machine ဟာ Ithaca Holdings က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ စကူတာဘရွန်း ပါ။
ဘရွန်း ဟာ နာမည်ကျော် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူနဲ့လက်တွဲဖူးတဲ့အထဲမှာ ဂျက်စတင်ဘီဘာ၊ အာရီယာနာဂရန်ဒီ နဲ့ ကာလီရေးဂျက်ဆင် လို နာမည်ကျော်တေးသံရှင်တွေလည်း ပါဝင်တယ်။ လက်ရှိတော့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်တေလာဆွစ်တစ်ယောက်တော့ တရားရေးရာကိစ္စတွေ နဲ့ အတော်လေးအာရုံနောက်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ တွစ်တာပေါ်မှာတော့ " နှစ်တော်တော်ကြာအောင် ကျွန်မခွန်အားနဲ့ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ပြန်ရနိုင်ဖို့ အသနားခံခဲ့ရတယ် " ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တယ်။
အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ Recording ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ recording ဘက်က တင်ကြိုပေးငွေကို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီး recording နဲ့အပြန်အလှန်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ recording ဘက်က Artist ကို ကန့်သတ်မှုတစ်ချို့ရှိနိုင်ပြီး ကန့်သတ်ချက်တွေကတော့ recording နဲ့ချုပ်ဆိုပြီးသားစာချုပ်တစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ပြီး တခြား recording နဲ့အလုပ်လုပ်တာ၊ ကိုယ်ပိုင်လေဘယ်တပ်ပြီး အယ်လ်ဘမ်တွေဖြန့်ချိတာ စတာတွေကို ကန့်သတ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာတော့ Ithaca Record ရဲ့ owner ဖြစ်သူ ဘရွန်းက Tswift ရဲ့ labelled master album ၆ ခုစလုံးကို ပိုင်ဆိုင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ်တွေကို Ithaca ကိုရောင်းလိုက်သူကတော့ Scott Borchetta ပါ။ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာ မသိရသေးပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေကတော့ Tswift အနေနဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်တွေ ကရရှိမယ့် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာကိုမှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်သလို၊ အခန့်မသင့်လို့အဲဒီအယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတွေဆိုမိ၊ သုံးမိရင်လည်းတရားစွဲခံရဦးမှာပါ။
တစ်ချို့ကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရပ်ပါကြီး ကန်းနီးဝက်စ် လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ဝက်စ် အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Famous ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. ဆိုတဲ့စာကြောင်းတစ်ခုပါဝင်နေပြီး ဝက်စ် ကတော့ သီချင်းမထွက်ခင် Tswift ကို ဒီစာသားထည့်ဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့သလို Tswift ကလည်း သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ နောက်ပြီး ဝက်စ် ဟာ ဘရွန်းနဲ့ နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိသူတဲ့။
လောလောဆယ်တော့ Tswift တစ်ယောက်သူမရဲ့ သီချင်းအယ်ဘမ်တွေပြန်ရနိုင်ဖို့ တရားရုံးမှာ ဖြေရှင်းရမယ့်ပုံပေါ်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ အဆိုးဆုံးရန်သူတွေက အခုအခါ Scotter Braun နဲ့ Scott Borchetta တို့ဖြစ်သွားပြီး Look what you made me do လို့ Tswift ဘက်က ပြောရမလိုပါပဲ။
Tswift နဲ့ သူ့သီချင်းတွေက Never ever getting back together သီချင်းအတိုင်းပဲဖြစ်မလား .. ဒါမှမဟုတ် You Belong with me လိုမျိုးပဲဖြစ်လာမလား ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ သုံးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ညဈေးတန်းကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ
Hailey Baldwin ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာရဲ့လား JB ရယ်
ရန်ကုန်ကို ပို့မယ့် ကြက်ဥအတုနဲ့ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲအတုများ သိန္နီရေပူဂိတ်တွင် ဖမ်းမိ